Ko Toe: February 2007
“မခင်နှင်းဆီ ရယ် .. မခင်နှင်းဆီ ရယ် .. တဖက်သတ်ကျိတ်ပိုးလေးနဲ့ တိတ်တခိုးဆွေးတဲ့ ကျွန်တော်ရယ် .. ဘာပဲပြောပြော ရာဇ၀င်ရှိတယ် .. ခုတော့လဲ ဒါတွေ ဒါတွေ ပြီးခဲ့ပါပြီ .. ပြီးခဲ့ပါပြီ .. ဒါပေမယ့်လည်း .. တစ်ရံတစ်ခါတော့ .. သတိရနေပါသည် .. သြော် .. သြော် .. ငယ်ငယ်တုန်းက .. မခင်နှင်းဆီ .. ”
အဆိုတော်ကိုလွှမ်းမိုး ဆိုတဲ့ သီချင်းပေါ့၊ အခုနားထောင်ဖြစ်တာက ရာဇာဝင်းတင့်ကပြန်ဆိုထားခြင်းပါ ..
အဲ .. အဲဒီသီချင်းကို ကိုတိုးတစ်ယောက် သိပ်ကြိုက်တာပေါ့ .. တစ်ပတ်ကိုတော့ အနည်းဆုံး တစ်ခါ နှစ်ခါလောက် နားထောင်ဖြစ်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ဟိုးတလောက ဒီသီချင်းကို ဘာရယ်ကြောင့်မှန်းမသိ ရုံးမှာ အဲဒီ သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းကိုပဲ .. လေးငါးရက်လောက်ဆက်တိုက်လောက် နားထောင်ဖြစ်တယ်။ ရုံးမှာ နားထောင်တယ် ဆိုလို့ Speaker နဲ့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ .. Headset နဲ့ပါ ဗျာ .. ဒါပေမယ့် အသံလေးတင်ထားတဲ့ အတွက် ဘေးနားကလူကတော့ ကျွန်တော်ဘာနားထောင်နေသလဲဆိုတာကို အတိုင်းသားကြားနေရမှာပါ။ ဒီအတွက် .. သူ့မှာ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး .. သူလည်းထိုနည်းတူပါပဲ .. သူ့သီချင်းသူ Headset နဲ့နားထောင်တတ်ကြပါတယ်။ သူ့သီချင်းကိုယ်ကြား ကိုယ့်သီချင်းသူကြားပေါ့။ ကျွန်တော် မြန်မာသီချင်းတွေ နားထောင်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သူတို့သိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် .. မှတ်မှတ်ရရ .. တနင်္လာနေ့လောက်ကနေ စလိုက်တာ သောကြာနေ့လောက်လည်းရောက်တော့ အရှေ့က ထိုင်းမလေးက နောက်ကိုလှည့်ပြီး စပ်စပ်စုစုနဲ့ .. “ဘာလို့ ဒီသီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းကို နေ့တိုင်းဖွင့်နေရတာလည်း .. ပြင်းစရာမကောင်းဘူးလား .. ဘာကိစ္စနဲ့ ဒီလောက်တောင် ဒီသီချင်းကို ကြိုက်ရတာလဲ .. သီချင်းအဆိုတော်နဲ့ သီချင်းနာမည်ကရော” လို့ ဆက်တိုက်မေးခွန်းတွေနောက်မှာ ကျွန်တော်ခပ်တည်တည်နဲ့ “ငါ့ဘကြီးရဲ့ မခင်နှင်းဆီ” လို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ကြောင်စီစီလုပ်နေတဲ့ သူ့ကိုကြည့်နေရင်း သူ နောက်ထပ်ဘာမေးခွန်းတွေထပ်မေးမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သိပါတယ် .. ဒါပေမယ့် “မင်းအလုပ်ကို မင်းလုပ်ပါလား .. သိချင်ရင်နောက်မှ ငါ့ဘကြီးနဲ့ မခင်နှင်းဆီအကြောင်းကိုမေးပါလား” ဆိုပြီး အတည်ပေါက်နဲ့ထပ်ပြောလိုက်တော့မှ “အိုကေ .. အိုကေ” ဆိုပြီး လှည့်သွားပါတော့တယ် ဗျာ။ ပြောလိုက်တဲ့ စကားအတွက် သူ့နောက်ကနေ ကြိတ်ပြီးပြုံးနေတဲ့သူကတော့ ကျွန်တော်ပါ ဗျာ။
အန္ဒိယလေသံဝဲ၀ဲဖြင့် အမြဲပြောပြောတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ “ငါသူ့ကို ခါးတည်တည် (ခပ်တည်တည်) နဲ့ ပြောလိုက်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေးကို သတိရရင်း
Posted by MYO HAN HTUN at 7:35 AM3comments
Posted by MYO HAN HTUN at 7:57 PM5comments
ဖြုတ်ယူသွားလေ ပါတော့တယ် ..
Posted by MYO HAN HTUN at 3:56 PM0comments
ကျွန်တော် ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ အလုပ်အရမ်းများနေပါတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စထက် ရုံးအလုပ်ကပို များနေတာကြောင့် ဘာမှရေးနိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ။ “အခုရှင်းမှ နောင်ရှင်း” ဆိုတဲ့ လက်ကိုင် ဝေါဟာရအရ အကြွေးမထားတတ်လို့ အလုပ်တွေအကုန်ရှင်းထုပ်နေရပါတယ်။ မအားပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းမှာ လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေကိုတော့ သိပ်သဘောတွေ့မိပါတယ် ဗျာ။ အလုပ်က ကျွန်တော့် ဘ၀ပါ။
“သူများပျော်လို့ မပျော်နိုင် ရည်စားပစ်လို့မှိုင်” ဆိုသလို Valentine ကာလမှာ နှင်းဆီပန်းအနီတွေကို မြင်တိုင်း တွေဝေမှိုင် ငေးငိုင်နေရသူကတော့ ကျွန်တော်ပါ ဗျာ။
ထားပါတော့ .. အောက်မှာတော့ ကျွန်တော် အရမ်းနှစ်သက်တဲ့ Quote လေးကို Valentine အခါသမယမှာ အားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ..
Let those love now who never loved before. Let those who always loved now
love the more.
ယခင် ဘယ်တုန်းကမျှ မချစ်ဖူးသူတွေ ယခု ချစ်ကြပါစေ။ အမြဲ ချစ်နေကြသူတွေ ယခု ပိုလို့ ချစ်ကြပါစေ။
Posted by MYO HAN HTUN at 9:55 PM0comments
Posted by MYO HAN HTUN at 7:44 AM2comments
“လက်တို့ပြီးတော့ ပြောရအုံးမယ်” ဆိုတဲ့ C-Box ကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြောချင်တာပြော ရေးချင်တာရေးခဲ့ပါ။
Posted by MYO HAN HTUN at 8:26 PM0comments
ဟိုး .. အဝေးက
Posted by MYO HAN HTUN at 3:02 PM4comments
Posted by MYO HAN HTUN at 2:04 PM2comments